अव भ्रष्टलाई स्वागत नगरौं
त्यसै पनि मुलुक नागरिकले बनाउने हो, आफू सुहाउँदो बनाउने हो । हामीले पटक पटक पद्धति फेर्‍यौं, आफ्नै र हामीले चुन्ने जनप्रतिनिधिको बानी बदल्न सकेनौं । फलत हाम्रो देश समस्या र अविकासको थुप्रो बनेको छ । पृथ्वीनारायण शाहले बिशाल नेपाल एकीकरण गर्दा अमेरिका भन्ने देश जन्मेकै थिएन । जर्मनी एकीकृत भएकै थिएन । मार्क्स र लेनिनको अस्तित्व नै थिएन । भारत पाकिस्तान बंगलादेश देश बनेकै थिएनन् । नेपाल प्राचीन कालदेखि अस्तित्वमा रहेको जेठो मुलुक पो हो त । यस्तो मुलुक आज कस्तो हुनुपथ्र्यो, कस्तो छ ?
अव जनताले जो भ्रष्टाचारी भनेर डामिएका छन्, तिनलाई खादा ओढाउने, माला पहिराउने, स्वागत गर्ने र तिनका लामा चिल्ला भाषण सुन्न छाड्नुपर्छ । जब जनताले व्यवहारमा भ्रष्ट नेतालाई बहिष्कार गर्न थाल्छौं तवमात्र नेताको दिमाग ठिक ठाउँमा आउला र भ्रष्टाचार कम हुनथाल्ला । अन्यथा जे गरे पनि जनताले स्वागत गरिहाल्छन् भनेर नेताले जनतामाथि अन्याय गरिरहेका छन् । जनता चुपलाग्दा देशमाथि अन्याय हुनपुगेको छ । हामी अविकसित भएका छौं ।
हामी सधैं स्वतन्त्र तर अविकसित । हामीभन्दा पछि बनेका र स्वतन्त्र भएका मुलुकहरु विकासको फड्को मारेर कहाँ पुगिसके । हामी भने उही भ्रष्टाचार र कमिशन खुवाएर नेता पालिरहेका छौं । यसकारण अव आम नागरिक सबैले जुनसुकै नेता हुन्, तिनलाई स्वागत गर्न छाड्नुपर्‍यो । जुन नेताले जनअपेक्षाअनुसार कम गर्छ, जनताको आवाज सुन्छ र जनमैत्री स्वभाव देखाउने गरेको छ, त्यस्ता नेताको मात्र स्वागत गरौं । तिनका कुरा सुनौं, तिनलाई सुझाव दिनेगरौं ।
जनता पीडामा छन् । जनतामाथि कर थोपरिएको छ । जनताका काम घूस नदिई हुँदैन । यसरी चौतर्फी रुपमा जनतामाथि शोषण गर्ने नेता र प्रशासकका ज्यादति अव पनि जनताले सहेर बस्ने ? लोकतन्त्रमा लोकको कुरा सुन्ने कि लोकले घूस ख्वाएर आफ्ना काम गराउनु पर्ने ? यसकारण जनताको संचेतना जरुरी छ ।